Akwụkwọ edemede Patrick Tripp na Martech Zone |
Edemede site na Patrick Tripp
N'adịghị ka balloons na afụ gum, Martech agaghị agbawa mgbe agbatị na ihe yiri ka ọ bụ nkwụsị. Kama, ụlọ ọrụ Martech ga-aga n'ihu ịgbanwee ma gbatịa ma gbanwee ka mgbanwe na ihe ọhụrụ - dịka ọ mere ọtụtụ afọ gara aga. O nwere ike ịdị ka ụlọ ọrụ anaghị eto eto ugbu a. Ọtụtụ ndị ajụwo ma ụlọ ọrụ ndị amoosu-nke ihe karịrị puku atọ, narị asatọ na-ewute ewute-ọ nwere ebe ọ na-aga. Azịza anyị dị mfe: Mba, ọ bụghị. Innovation abụghị